Matongerwo eNyika, 15 Ndira 2016
Chishanu 15 Ndira 2016
Ndira 15, 2016
Zvinhu mubato reZanu-PF zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kunyanya mudunhu reMidlands rinozivikanwa nekutsigira zvakasimba mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Kunyange hazvo mutauriri waVaMugabe, VaGeorge Charamba, pamwe nemutauriri webato ravo reZanu PF, VaSimon Khaya Moyo, vakaramba mashoko aya vachiti ndeemanyepo, pane vamwe munyika vanooona sekuti pane chokwadi mumashoko aya.
Ndira 14, 2016
VaKasukuwere Voburana Zvakare neKanzuru yeMutare
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu nemaguta, VaSaviour Kasukuwere, vayambira vakuru vekanzuru yeguta reMutare kuti vasunge dzisimbe kuitira kuti vachengetedze mabasa avo sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka muguta iri.
Panguva iyo ruzhinji rwuri kuchema kuti rwuri kunonga svosve nemuromo munyika, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe nemhuri yavo, vanonzi vari kunze kwenyika, kure kure, kumabvirazuva, uko kwavanonzi vari kuzororo remwedzi wose vachipfachura
Misoro yeNhau, China Ndira 14, 2016
Ndira 13, 2016
Hofisi yaVaMnangagwa Inopwanywa Zvakare
Hofisi yevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, inonzi yakapwanywa neChipiri manheru.
VaMukonza Vanoti Havakangwani Zvinoreva Ziva Kwawakabva
Chizvarwa cheZimbabwe, VaRicky Mukonza, avo vari kugara kuSouth Africa, vanoti havana kurasa hama dzavo kubva pavakapira gotsi musha wavo vachienda kuSouth Africa
Zimbabwe Yoyambirwa Kutanga Yabhadhara Zvikwereti Zvayo Zvose Kuti Ibatsirwe
Mumiriri weFrance muZimbabwe, VaLaurent Delahousse, vanoti Zimbabwe haikwanisI kuwana rubatsiro hwemari yezvirongwa zvekuderedza hukasha hwekusanduka kwemairiro ekunze kana kuti Climate Change kudzamara yabhadhara zvikwereti zvayo
Misoro yeNhau - Chitatu, Ndira 13, 2016
Ndira 12, 2016
Zvikoro zvavhurwa munyika paine mashoko ekuti hutungamiri hwezvimwe zvikoro hwanga hwuchidzosera kudzimba vana vasina kubhadhara mari dzechikoro kana dzeruvako
Hurumende nevashandi vayo zviri kukandirana makobvu nematete panyaya yemari dzemabhonasi dzaifanirwa kunge dzakabhadharwa nehurumende muna Mbudzi.
Misoro yeNhau, Chipiri Ndira 12, 2016